नेपाल आज | सरकारले नागरिकता दियो भने दुई हात जोडेर लिन्छु (भिडियोसहित)
सरकारले नागरिकता दियो भने दुई हात जोडेर लिन्छु (भिडियोसहित)
सोमबार, १३ कार्तिक २०७४ गते प्रकाशित - नेपाल आज (DR)
भाग सिंह, नेपालमा व्यवसाय गर्दै आएका एक शिख हुन् । नेपालमा शिखहरु कम छन् । भएकाहरुमा पनि ठूलो शोषण रहेको भाग सिंहले बताएका छन् । नेपालका शिखहरुलाई शोषण गर्ने चाहिँ प्रितम सिंह नामका व्यक्ति छन् । जो आफूलाई नेपालको सफल भारतीय व्यवसायी भन्न रुचाउँछन् । भाग सिंहले प्रितमको वास्तविकता यसरी व्यक्त गरे ।
‘नेपालमा शिख धर्म मान्ने मानिसहरु अत्यन्त कम छन् । जति छन् उनीहरुका लागि नेपालमा हिन्दूहरुको मन्दिर भने झै शिखहरुको श्री गुरुद्वार सत्संग छ । यो सत्संगको आफ्नै सम्पत्ति पनि छ । तर सत्संग समितिमा भने केही व्यक्तिहरुले लप्पन छप्पन गर्दै आएका छन् । समितिको कुनै काम पनि सिस्टममा छैन । शिखले पालना गर्नु पर्ने नियम पनि मान्ने कोही भएन । अनि एक दिन म सिडिओ अफिस गएर पुरानो सत्संगको कागज झिके । लालपुर्जा पनि हेरे ।
अनि नविकरणका लागि पनि फेरि गएँ । त्यहाँ गएर हेर्दा त थाहा भयो कि पुरानो सत्संग समिति त कता हराएछ, अर्को कीर्ते सत्संग समिति खडा भइसकेको रहेछ । यस्तो देखेर म झसंग भएँ । किनभने पहिले बुटवलमा पनि थियो हाम्रो सत्संग । त्यहाँ पनि सत्संगको जमिन अपचलन गर्न खोजिएको थियो ।
मैले सिडियोबाट कागज फोटोकपी गरेर ल्याएँ । अनि मैले कीर्ते समिति खडा गर्नेहरु प्रितम सिंह लगायतसँग कुराकानी गरेँ । नयाँ समितिमा त प्रितम सिंहको परिवारै रहेछन् । प्रितमका ज्वाईं अध्यक्ष, प्रितमका नाति अंगद सिंह उपाध्यक्ष, प्रितमको भाइको छोरा हर्नेक सिंह महासचिव, अर्को एक नातेदार सचिव रहेछन् । यसरी उनीहरुले गुरुद्वारा दर्ता गराएका रहेछन् ।
यो कुरा मैले आफ्नो समुदायमा ल्याएर देखाएँ । तर हाम्रो समुदायका मानिसहरु सबै डराए । प्रितमले हाम्रो समुदायका मानिसलाई त्यसरी आतंकित बनाएर राखेको त्यसपछि मात्रै मैले थाहा पाएँ । अनि मैले सिडियोमा निवेदन दिएँ । मैले निवेदनमा कीर्ते समिति खडा गरेर अधार्मिक काम हुँदै गरेको लेखे ।
त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कारबाही गर्न तोक लगाइदिनु भयो । त्यसपछि विषय प्रहरी चौकीमा पुग्यो । प्रहरी कहाँ ल्याएपछि प्रितम सिंह आफै आएनन् । उनका नाति अंगद सिंह, गुरुचरण सिंहलगायत आठ दश जना आए । हामी दुई जना थियौं । डिएसपीकै अगाडि कुटाकुट भयो । त्यसपछि पुल्चोक प्रहरीमा पुग्यौं । त्यहाँ कागज गर्न लगायो । मैले त्यहाँ कुन विधानअनुशार तिमीहरु अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो ? भनेर सोधे । उनीहरुले कागज प्रितम सिंह मात्रै भएकोले यो प्रश्नको उत्तर प्रितमले दिन सक्ने बताए । त्यसपछि एक महिनाको समय उनीहरुले मागे ।
एक महिना पूरा भयो । तर उनीहरुले बोलाउने सुरै गरेनन् । फेरि म प्रहरी कहाँ पुगे । त्यसपछि प्रहरीले बोलायो । त्यसपछि उनीहरुले फेरि झगडा गर्ने योजना बनाएका रहेछन् । हामी सिडिओकोमा पुगे । सिडियोमा प्रितम सिंह फेरि पनि आएनन् । सिडिओसाबले प्रश्न गर्नुभयो, ‘खै प्रितम सिंह ?’ उनीहरुले जवाफ दिए कि उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ । मैले भने, ‘सिडिओ साबको अवाडि आउँदा धेरैको बिरामी बढ्छ ।’
उनीहरु अलि डराए । एक हप्ताको कागज बनाइयो । गुरुद्वारमा आएर पुन छलफल भयो । छलफलमा रबि सिंहले राम्रो भूमिका खेलेनन । फेरि हामीले उनीहरुलाई सोध्यौं । प्रितम टिमले केही जवाफ फर्काएनन् ।
पुरानो समिति किन भत्काएर रातारात नयाँ कमिटी बनाउने विषय नै हो मुख्य कुरा । नयाँ समिति बनाउने र सत्संगको सम्पत्तिमा हिनामिना गर्ने नियतले एउटै परिवारका मानिस लागेको स्पष्ट नै छ ।
उनीहरु दुई नम्बरी काम गर्छन् तर दुःख भने प्रितम सिंह र उनको परिवारले मलाई दुःख दिन्छ । १५ वर्ष अगाडि पनि मलाई दुःख दिएको हो । मेरो पासपोर्ट नविकरण गर्न भनेर प्रितम सिंहलाई दिएको थिएँ । उनले फिर्ता दिएन । अहिले त्यो विषय मुद्धामा छ ।
प्रितम सिंहले काठमाडौंमा भएका र नेपालमा वर्षौदेखि बसिआएका शिखहरुलाई नेपाली नागरिकता लिनु हुँदैन भनेर डर देखाइदिए । तर आफ्नो छोरा नातिको निकालेर व्यापार व्यवसाय गरेर बसिरहेका छन् । उनले आफ्ना छोरा नातिलाई कसैलाई जन्मसिद्ध कसैलाई वंशजको नागरिकता निकालिदिएका छन् । भारतमा जन्मेको मान्छेले नेपालमा कसरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाउँछ ?
मैले त्यसरी दुई नम्बरी नागरिकता लिन मानिनँ । मैले पाएँ भने अंगिकृत नागरिकता पाउँछु । सरकारले दियो भने दुई हात जोडर नेपालको नागरिकता लिन्छु । तर गलत तरिकाले लिँदिनँ । मेरो छोरा (हर्षिम्रन) यहिँ जन्मेको हो तर उसले पनि पाएको छैन ।
अहिले गुरुद्वारा प्रितम सिंहले चलाएका छन् । उनले धन कमाउने माध्यममात्रै बनाएका छन् उनले । पञ्जावबाट भूकम्पका बेला ठूलो राहत आयो । तर प्रितम सिंहले राहत खाए ।
गुरुद्वारामा रहने पदाधिकारीले शिख धर्मको मुल्य मान्यताहरु पालना गर्नु पर्छ । तर प्रितम सिंहको कमिटी अत्यन्त अनुशासनहिन छ । कुनै नियम पालना गर्दैनन् उनीहरु । नाडीका कडा हुनु पर्छ, शरिरको कतैको पनि रौं काटन हुँदैन । फेटा सधै बाँध्नु पर्छ । आचरण राम्रो हुनुपर्छ । तर अंगद सिंहलाई हेर्नुहोस त गुन्डाको जस्तो रुप छ ।
अंगदको हजुरबाबुले ४० वर्ष दमन गरे । अब दमन गर्न प्रितमले नातिहरुलाई त्यो काम दिएका छन् । प्रितमले परिवारवाद लागू गरेका छन् । कसैले यो गलत कुराको विरोध गर्यो भने उनी डर धाक धम्की देखाउँछन् । अरुलाई आतंकीत पार्छन् ।’
स्वस्थानी कथा : के गाेमाकाे उमेर वास्तवमै सात वर्षकाे थियाे ? (भिडियोसहित)
बुधबार, ०९ माघ २०७५
वाइडबडीमा सबैको मिलेमतो हुन सक्छ, कंसाकार एक्लैको दम छैन (भिडियोसहित)
अनसनस्थलबाट डा. केसीको प्रश्नः ‘के मसँग सरकारले गरेको सम्झौता जालझेल मात्रै थियो ?’